Komishiniin Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaan Dr. Mararaa hidhuu isii cimsee balaaleffate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Komishiniin Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaan Dr. Mararaa hidhuu isii cimsee balaaleffate
Mootummaan Itoophiyaa mormitoota hidhuu dhiisee gaafii ummataa deebisuudhaaf tankaarfii fudhachuu eegaluu qaba, jedha Komishiniin Gamtaa Awurooppaa
Komishiniin Gamtaa Awurooppaa ibsa guyyaa har’aa baaseen tankaarfii mootummaa Itoophiyaa ummata irratti fudhataaru cimseee balaaleffate. Komishiniin Gamtaa Awurooppaa mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaa Guddinaa hidhuu isaa haalaan qeeqee jira. Akka Komishinii kanaatti, mootummaan Itoophiyaa gaafii ummataaf hidhaa fi ukkaamsaa osoo hin taane deebii quubsaa fi hatattamaati laatuu kan qabu. Hidhamuun Dr. Mararaa yaalii rakkoo biyyattiin keessa seente furuudhaaf godhamuuf gufuu guddaadha, jedha ibsi Komishinii Gamtichaa. Ibsi inni ammaa kuni isa kana dura bayaa ture hunda irra cimaa fi akeekkachisa kan uf keessaa qabuudha.
Hidhamuu Dr. Mararaatin yaaddoon guddaan isaan seenuu dubbata Komishiniin Gamtaa Awurooppaa. ‘Yaaddoo keenna mootummaa Itoophiyaa biraan geenneerra’, jette dubbi-himtuun Komishinichaa. ‘Sa’aa kanatti Itoophiyaan kan barbaaddu mormitoota hidhuu osoo hin taane gaafii ummataaf deebii laatuudhaaf tankaarfii qabatamaa fudhachuu eegaluudha’. Labsii yeroo muddamsuun wolqabatee ukkamaasaa fi dhiittaan mirga namaa akka hin raawwanneef akkeekkachiisee ture Komishiniiin Awurooppaa. Hanga ammaatti mootummaan Itoophiyaa gorsas ta’ee akeekkachiisa Komishinii Gamtaa Awurooppaa kan dhagaye hin fakkaatu.
Komishiniin Gamtaa Awurooppaa qaama mootummaa Itoophiyaatiif gargaarsa diinagdee fi siyaasaa guddicha laatuudha. Humna qabu kanatti fayyadamuudhaan, Komishiniin kuni barbaade taanan, dhiibbaa guddaa mootummaa Itoophiyaa irraa kayuudhaan yaaliii jijjiirama bu’uraa biyyattii keessatti fiduudhaaf godhamu keessatti shoora guddaa taphachuu ni danda’a.
Previous articleAchi-buuteen Dr. Mararaa Guddinaa ammas hin beekamne
Next articleABO-QC akka haarawaatti uf ijaaruu fi hooggana haarawas filachuu ifa godhe